प्रदेश Archives - Page 34 of 43 - Kheladi News Kheladi News
आईटिएफमा गण्डकीलाई तीन रजत पदक
नेपालगन्ज(खेलाडी न्युज)-नेपालगन्ज स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा भएको आइटिएफ तेक्वान्दोमा गण्डकी प्रदेशले ३ वटा रजत पदक हात पारेको छ । सहायक प्रशिक्षक प्रतिक घर्तीमगर अनुसार सुस्मीता थापा, वसन्ती थापाले एकल प्रतिस्पर्धामा रजत पदक जित्न सफल भए । समूहगत प्रतिस्पर्धामा पनि गण्डकी प्रदेशले रजत पदक हात पारेका हुन्। महिला टिममा मसिना तामाङ, स्नेहा तामाङ, सुस्मिता थापा, सृजना थापा र अनुष्का बुढा रहेका थिए । पुरा पढौ
गण्डकी प्रदेश महिला टोलीले जित्यो रजत पदक
नेपालगन्ज (खेलाडी न्युज)-गण्डकी प्रदेश महिला हक्कीमा स्वर्ण पदक जित्नबाट चुकेको छ । निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा गण्डकी प्रदेश सुदुरपश्चिम प्रदेशसँग १-० गोलले पराजित हुदै स्वर्ण जित्ने सपना तुहिएको छ । नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई १-० गोलले पराजित गर्दै फाईनल सुरक्षित गरेको हो । फाईनल प्रतिस्पर्धामा खेलको ३४ औं मिनेटमा गोलको सामना गरेपछि गण्डकी प्रदेश रजत पदकमै चित्त बुझाएर पोखरा फर्किएको छ । पाएको दुई पेनाल्टी कर्नरलाई समेत गण्डकी प्रदेशले उपयोग गर्नबाट चुक्यो । प्रतियोगितामा नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबले कास्य… पुरा पढौ
नेपालगन्ज(खेलाडी न्युज)-गण्डकी प्रदेश महिला हक्कीमा स्वर्ण पदक नजिक पुगेको छ । आज स्वर्ण पदकको लागि गण्डकी प्रदेशले सुदुरपश्चिम प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ । नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई १-० गोलले पराजित गर्दै फाईनल सुरक्षित गरेको हो । ५८ औं मिनेटमा रेविका विकले गोल गर्दै फाईनल पुर्याएका हुन् । खेल टाईब्रेकर तर्फ उन्मुख हुदैं गएको अवसथामा उनले दुई डिफेन्सलाई कटाउँदै गोलकिपर मात्रै भएको अवस्थामा गोल गरिन् । आर्मीले दुई पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो । तर अवसरलाई सदुपयोग गर्नबाट चुक्यो । यद्यपी… पुरा पढौ
आठौंमा फुलकन्ट्याक्ट कराँतेमा गण्डकी प्रदेश टिम च्याम्पियन, ४ स्वर्ण, ३ रजत र २ कास्य
नेपालगन्ज(खेलाडी न्युज)-विराटनगरमा आयोजित सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा एउटा मात्रै स्वर्ण पदक जितेको पोखरा(गण्डकी प्रदेश)ले नेपालगन्जमा आयोजित आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भने टिम च्याम्पियन बनेको छ । नेपालगन्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस परिसरमा भएको प्रतिस्पर्धामा ऐतिहासिक पदक जित्दै टिम च्याम्पियन बन्दा पदक तालिकामा पनि माथि पुगेको छ । प्रशिक्षक दिपकबहादुर गोदारका अनुसार ४ स्वर्ण, ३ रजत र २ कास्य पदक गण्डकी प्रदेशले जितेको छ । ७ वटा तौल समूहमा फाईनलमा प्रतिस्पर्धा गरेको गण्डकी प्रदेशले ४ स्वर्णमा आफनो पकड राख्यो । खुला तौल… पुरा पढौ
टेनिसमा गण्डकी प्रदेशका खड्का सेमिफाईनलमा
पोखरा(खेलाडी न्युज) -आठौ राष्ट्रिय प्रतियोगिता अन्तरगत रुपन्देहीमा लन टेनिसका प्रतियोगिताहरु जारी छन । देविनगरस्थित लन टेनिस कोर्टमा शुक्रबार भएको प्रतियोगिताको खुल्ला, मेन्स सिगल, मेन्स डबल्स, बुमन सिगल र मेन्स डबल्स ईभेन्टका सेमीफाईनल समीकरण पुरा भएका छन भने बुमन डबल्स र मिक्स डबल्सको फाईनल समिकरण पुरा भएको छ । मेन्स सिगलतर्फको आईतबार हुने पहिलो सेमीफाईनल खेलमा एपीएफका सन्तोष खत्रीले एनआरएनका संरक्षणभुुषण बज्राचार्यसंग तथा अर्को सेमीफाईनल खेलमा प्रनव खनालले प्रदीप खड्कासंग खेल्नेछन । प्रदिपले नबिना मगरलाई ६–१, २–६, ६–२ को सुपर ट्राईबेकरमा… पुरा पढौ
प्रदेश २ लाई ६ स्वर्ण
पोखरा(खेलाडी न्युज)- प्रदेश नं. २ ले आठौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तरगत पुरुष कुस्ती प्रतियोगितामा ६ स्वर्ण हात पार्दै अग्र स्थानमा रह्यो । प्रदेश २ ले ५७ केजी, ६१ केजी, ६५ केजी, ७९ केजी, ९२ केजी र १२५ केजीमा स्वर्ण हात पारेको हो । १० स्वर्णका लागि भएको प्रतियोगितामा प्रदेश ५ ले ७४ केजी, ८६ केजी र ९७ केजीमा गरि तीन र नेपाली सेनाले ७० केजीमा एक स्वर्ण हात पा¥यो । प्रदेश २ का नरेश यादवले ५७ केजीमा स्वर्ण हात पारे ।… पुरा पढौ
प्रदेश ७ लाई तीन स्वर्ण
पोखरा(खेलाडी न्युज) प्रदेश नं. ७ ले आठौ राष्ट्रिय खेलकुद अन्तरगत कुस्तीमा तीन स्वर्ण हाता पार्न सफल भएको छ । प्रदेश ७ का मनिषा सिहले ५० केजी तौल समूहमा स्वर्ण हात पारिन । यस समूहमा सेनाकी लक्ष्मी तामाङ्खले रजत र प्रदेश ५ की सविता श्रेष्ठले कास्य पाईन् । यस्तै ५३ केजीमा प्रदेश ७ की सिमाङ्खी दुवेले स्वर्ण, सेनाकी कोपिला थापा मगरले रजत र प्रदेश १ की राधा कुमारी खत्वेले कास्य पाए । ५५ केजी तौलमा प्रदेश ७ की संगीता धामीले स्वर्ण… पुरा पढौ
हकीमा गण्डकी प्रदेशसँग आर्मी बराबरी
पोखरा(खेलाडी न्युज) उपाधि जितेको झण्डै महिना पछि आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा उत्रिएको गण्डकी प्रदेशको हकी टोलीले बुधबार नेपाली सेनासँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको छ । गत फेब्रुअरी दोस्रो साता झापाको दमकमा आयोजित गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति पुरुष हकीको उपाधि उचालेको गण्डकी प्रदेशले आर्मीसँग बराबरीमै चित्त बुझायो । झापाको दमकमा नेपाल आर्मीलाई १-० गोलले पराजित गर्दै उपाधि उचालेको गण्डकी प्रदेशले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको हकीको उदघाटन खेलमा फेरी आर्मी विरुद्ध उत्रिएको थियो । आजदेखि प्रदेश पाँचमा सुरु भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद… पुरा पढौ
गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कप अन्तरप्रदेशस्तरीय क्रिकेटको फाईनलमा
धनगढी(खेलाडी न्युज)-सुदुरपश्चिम धनगढीमा आयोजित मुख्यमन्त्री कप अन्तरप्रदेशस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेश फाईनल प्रवेश गरेको छ । सेमिफाईनलमा प्रदेश न. ३ लाई ५ रनले पराजित गर्दै गण्डकी प्रदेश फाईनल प्रवेश गरेको हो । टस जितेर व्याटिंग गरेको गण्डकीले अनिल गुरुंगको ४४ रनको महत्वपूर्ण इनिंगमा २० ओभर खेल्दै ६ विकेटको क्षतिमा १०७ रन बनाएको थियो । उनले ३ चौका र दुई छक्का हिर्काए । आकाश थापाले १७ रनको योगदान दिए । १०८ रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश नं ३ भने १०२ रनमै समेटिदैं… पुरा पढौ
मुख्यमन्त्री कप अन्तरप्रदेशस्तरीय क्रिकेटमा गण्डकी प्रदेशको विजयी शुरुवात
पोखरा(खेलाडी न्युज)-धनगढीमा आयोजित प्रथम मुख्यमन्त्री कप अन्तरप्रदेशस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगितामा बिहीबार प्रदेश नं ५ लाई पराजित गर्दै गण्डकी प्रदेशले विजयी शुरुवात गरेको छ । सन्तोष न्यौपाने, कप्तान विधान श्रेष्ठ, मन्जिल न्यौपाने ( नटआउट) र किशोर महतोले दोहोरो अंकको स्कोर तयार पार्दै गण्डकी प्रदेशले प्रदेश नं ५ लाई ८७ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । सन्तोष न्यौपानले १३ रन बनाउने क्रममा २९ बल खेल्दै आउट भए । विधान भने २२ बलमा १८ रन जोडे । उनले तीन चौका प्रहार गरेका थिए ।… पुरा पढौ